Ny fampiharana sy lalao 7 tsara indrindra ho an'ny ankizy kely ho an'ny Android | Androidsis
Ny fampiharana sy lalao 7 tsara indrindra ho an'ny ankizy kely ho an'ny Android
Androany, iray amin'ireo fomba fanelingelenana sy fianarana mahomby indrindra ho an'ny ankizy kely ny finday Android. Ary izany dia, amin'ny alàlan'ireto sy ny fampiharana sy lalao rehetra misy, ny zandriny indrindra amin'ny trano dia afaka manararaotra ny fotoana malalaka ananany. Izany indrindra no antony anoloranay anao ity lahatsoratra fanangonana vaovao ity, iray izay ho hitanao ny fampiharana, fitaovana ary lalao 7 tsara indrindra ho an'ny zaza.
Izahay dia mitanisa ireo lalao sy fampiharana mahaliana indrindra izay misy ao amin'ny Google Play Store ho an'ny ankizy kely ankehitriny. Malalaka daholo ary, mazava ho azy, ny tsara indrindra amin'ny karazany avy. Ho fanampin'izay, manana naoty tsara sy fanehoan-kevitra manohana azy izy ireo.
Ireto ambany ireto dia nametaka andianà fampiharana tsara indrindra ho an'ny ankizy kely ho an'ny telefaona Android. Tsara homarihina, toy ny fanaontsika hatrany, izany maimaim-poana daholo ireo ho hitanao amin'ity lahatsoratra fanangonana ity. Noho izany, tsy mila mandoa vola ianao raha te hahazo iray na izy rehetra. Na izany aza, ny iray na maromaro dia mety manana rafitra fandoavam-bola bitika anatiny, izay ahafahana miditra amin'ny atiny bebe kokoa ao anatiny, ary koa ny fampiasa premium sy mandroso. Toy izany koa, tsy ilaina ny mandoa vola fa ilaina ny mamerina azy. Eny eny, andao isika hanatona azy.
1 Pejy fandokoana ankizy! Lalao ankizy!
2 Taratasy ao anaty boaty! Lalao fianarana abidia!
3 Lalao fanabeazana amin'ny ankizy ho an'ny ankizy! Mianara mamaky!
4 Ankizy EWA: Anglisy ho an'ny ankizy
5 Fifaninanana amin'ireo renivohitra
6 Anglisy ho an'ny ankizy: mianatra sy milalao
7 Sekoly Montessori
Pejy fandokoana ankizy! Lalao ankizy!
Ny iray amin'ireo zavatra tena tian'ny ankizy kely, tsy isalasalana, ny fandokoana. Izany no antony tsy tsy nahitana lalao an'ity karazana ity amin'ity lahatsoratra fanangonana ity, satria ity dia iray amin'ireo hetsika tena ankafizin'izy ireo ary, miaraka amin'izay, dia mahasoa amin'ny famoronana, ny famoronana ary ny fampandrosoana ny saina.
Tsy maninona na kely aza ny zaza. Ity fampiharana ity dia mety ho an'ireo izay 3 taona no ho miakatra. Ampianaro fotsiny izy amin'ny fizotrany ary hampiasa azy irery ilay zaza. Ho hitanao fa, ao anatin'ny minitra vitsy na mihoatra dia hahatratra azy io ary manomboka mandoko tsy miato.
Natao hanentanana ny fanandramana ny kanto Ary miaraka amina endri-tsoratra mahafatifaty sy manavakavaka 100 handokoana azy io, ary koa sary sy sary an-tsary am-polony ary sary hosodoko. Izy io koa dia ahitana lalao fianarana marobe, sarimiaina sy feo mahafinaritra mihoatra ny 300, boky fandokoana sary sy sary hosodoko ho an'ny ankizy, lalao ho an'ny ankizy 3 taona ka hatramin'ny hamolavola fahaiza-manao maotera tsara, lalao maimaimpoana ho an'ny zazavavy hampivelatra fahaiza-manao mialoha ny fanoratana, lalao sary ho an'ny ankizy biby sy ny fifehezana ny ray aman-dreny amin'ny lalao fandokoana maimaim-poana.
Taratasy ao anaty boaty! Lalao fianarana abidia!
Taratasy ao anaty boaty! dia fampiharana izay manana fomba sy lalao maro hianarana taratasy ho an'ny ankizy kely. Izy io dia fitaovana tena matihanina, pedagogika ary fialamboly ho an'ny faralahy amin'ny trano, ary manana tanjona ny hanampy amin'ny fivelarana sy ny fitomboan'izy ireo saina, amin'ny alàlan'ny fampisehoana teknika fianarana mamaky teny isan-karazany ho an'ny ankizy 2 ka hatramin'ny 5 taona. Mety hahomby amin'ny ankizy lehibe koa izy io, fa ny faralahy kosa no ifantohany.
Ity fampiharana ity dia manana lalao izay tsy maintsy mihaza sy misambotra litera ny ankizy mba hamoronana sy hananganana teny tsotra. Mahafinaritra sy mahafatifaty ireo litera ireo, ka mahasarika ny sain'ny ankizy kely izy ireo hanelingelina azy ireo amin'ny fianarana tsy tapaka.
Afaka mianatra ny abidia amin'ny litera ao anaty boaty koa ny ankizy!, Satria mampiasa ireo rehetra misy izy ireo, mba hahafahan'izy ireo mianatra mampiasa azy rehetra. Miaraka amin'ny fitaovana enti-miasa didaktika amin'ity rindrambaiko ity, ny ankizy koa dia mora mianatra ny feon'ny teny, sy ny dikany ary ny fomba sy ny fotoana hampiasana azy ireo.
Ny piozila rehetra arosony hananganana teny dia natao hampianarana; rehefa mamaha azy ireo dia mipoitra ny sary iray izay manome famaritana an-tsary ireo teny. Misy teny mihoatra ny 100 izay azon'ny ankizy ianarana noho ny fientanam-po mahafinaritra asehon'ireo litera sarimiaina amin'ireo lalao ao amin'ity app ity.
Lalao fanabeazana amin'ny ankizy ho an'ny ankizy! Mianara mamaky!
Lalao fanabeazana amin'ny ankizy ho an'ny ankizy! dia fampiharana tsara hafa ho an'ny ankizy kely manomboka amin'ny 4 ka hatramin'ny 5 taona. Izy io koa dia tena teknikan'ny ankizy manana fahasembanana mianatra sy ireo izay any amin'ny ambaratonga voalohany, raha jerena amin'ny fomba mahafinaritra sy mahafinaritra amin'ny lalao pedagogika sy sary momba ny litera, teny, voambolana ary abidia.
Ankizy mampiasa lalao fanabeazana ho an'ny ankizy ABC! Hianatra mamorona, mamaky ary manonona haingana ny teny sy ny vaninteny izy ireo. Mba hahafantarana sy hampiasana ny abidia koa. Ny zavatra hafa dia izany Hianatra manoratra teny tsotra izy ireo ary avy eo miroso amin'ny fanoratana teny lava sy sarotra kokoa. Izy io dia mpanampy mianatra tsara, tsy misy isalasalana, indrindra fa raha ny zaza dia manana fahasarotana amin'ny fianarana sy tsy fahampian'ny sain'ny olona, ​​satria ny sarimiaina, ny loko ary ny lalao rehetra misy ao amin'ity app ity dia tena mandroso sy mampiala voly.
Amin'izany fotoana izany, Ity fampiharana ity dia manampy ny ankizy hahatakatra teny, fa tsy hanoratra sy hanonona azy fotsiny. Mahatonga ny ankizy hianatra ny dikany amin'ny fomba azo ampiharina.
Ny fahombiazan'ity fampiharana ity ho an'ny ankizy dia aseho amin'ny naoty kintana 4.3 mahery, fampidinana mihoatra ny 5 tapitrisa ary fanehoan-kevitra miabo 25 mahery. Tsy noho ny tsy antony dia iray amin'ireo mpampiasa be mpampiasa indrindra ao anaty sokajy misy azy io.
Ankizy EWA: Anglisy ho an'ny ankizy
Mety efa naheno ny fampiharana EWA ianao tamin'ny fianarana teny anglisy taloha, ary izany dia mety noho ny lazan'ny fampiharana voalohany tany amin'ny Play Store, izay manana fampidinana mihoatra ny 10 tapitrisa sy naoty 4.6-kintana. EWA Kids: Anglisy ho an'ny ankizy no dikanteny natao ho an'ny faralahy, miaraka amin'ny fomba fampianarana sy ny fianarana namboarina ho an'ny faralahy.
Ireo kely dia afaka mampiasa an'ity app ity hampiasana azy mandritra ny 15 minitra isan'andro fotsiny, izay matetika dia ampy hanangonana fahalalana. Na izany aza, ho an'ny vokatra haingana sy maharitra kokoa dia tsara kokoa ny lava. Izy io koa dia manana sary, fanehoana ary, mazava ho azy, lalao isan-karazany izay manampy amin'ny fampianarana teny anglisy ny ankizy. Tena détactika izy io ary manolotra fomba sy teknika marobe hitrandrahana ny fiteny amin'ny ankizy kely.
Izy io dia miaraka amina lesona am-polony, fampianarana fototra ary fandikan-teny manampy amin'ny fizotran'ny fianarana, ary koa ny piozila sy lalao tsotra. Ahitana boky an-jatony miaraka amin'ny dikanteny sy sary izay manampy amin'ny fitazonana ny anglisy fototra ihany koa. Toy ny hoe tsy ampy izany, dia maneho ny maro amin'ny teny amin'ny alàlan'ny audios mba hahafantaran'ilay zaza ny fomba fanononana azy ireo.
Fifaninanana amin'ireo renivohitra
Contest an'ny renivohitra dia fampiharana sy fitaovana tsara ho an'ny ankizy kely ianaro izay tanàna sy renivohitra manan-danja indrindra eto an-tany. Amin'ity fampiharana ity, ny ankizy kely dia hahafantatra momba ny jeografia sy firenena maro.
Amin'ny alàlan'ny fanontaniana sy lalao safidy maro dia ho hitan'ny ankizy hoe iza ny renivohitra mety amin'ny firenena tsirairay. Ity lalao ity dia misy ny sarimiaina, sary an-tsary mahafinaritra ho an'ny ankizy kely, ary feon-kira mampihetsi-po. Mandritra izany fotoana izany dia mampianatra momba ny tsangambaton'ireo firenena, ny vola iraisam-pirenena tsirairay avy izy ireo, saina, faritra, kaontinanta ary maro hafa. Izy io dia mirakitra ihany koa maody lalao 10 maimaim-poana sy haavo fahasarotana 5 izay azo ovaina mora foana.
Anglisy ho an'ny ankizy: mianatra sy milalao
Fantatsika fa ny fianarana teny anglisy dia iray amin'ireo zavatra mahomby indrindra ho an'ny ankizy ao an-trano, mitondra fampiharana hafa ho anao izahay, iray izay miavaka ihany koa amin'ny maha iray amin'ireo tsara indrindra amin'ny karazany, noho ny karazana asany, lalao ary torolàlana momba ny didiko hianarana teny amin'ny lohahevitra samihafa toy ny abidia, isa, loko, endrika, andro amin'ny herinandro, volana amin'ny taona, voankazo, legioma, biby, vorona, sakafo, fitafiana, lakozia, trano fidiovana, efitrano fandraisam-bahiny, sekoly ary fanatanjahan-tena.
Ity fampiharana ity dia miaraka amin'ny lalao fitadiavana sy famoronana teny anglisy amin'ny alàlan'ny fanoratana. Izy io koa dia manasongadina piozila didaktika sy fomba fampianarana pedagogika ho an'ny ankizy kely izay manampy azy ireo amin'ny kilasiny anglisy ary, raha tsy ao anaty izy ireo, mba hahafantarana ny fiteny hafa koa. Amin'izany dia hianatra teny anglisy fototra ny ankizy.
Mba hamaranana ity lahatsoratra fanangonana ny fampiharana sy lalao tsara indrindra ho an'ny ankizy izay misy ao amin'ny Android Play Store ity dia manana Montessori Preschool izahay, fampiharana iray somary feno izay misy hetsika maro ary fanazaran-tena ho an'ny ankizy sy ireo ankizy manana fahalalana sy fianarana. olana na amin'ny fiainana andavanandro na any an-tsekoly.
Ity rindranasa ity dia miresaka lohahevitra toy ny loko, endrika, fanononana, famakiana teny tsotra sy sarotra, isa, fanampiana, famoahana, mozika ary maro hafa. Noho izany, Izy io dia iray amin'ireo feno indrindra amin'ny fampianarana sy ny fianarana. Izy io dia natao manokana ho an'ny ankizy 3 ka hatramin'ny 7 taona, fa mety ho tonga lafatra ihany koa ho an'ireo ankizy lehibe mbola tsy nahalala ny fototra tamin'ny mbola kely. Izy io dia miasa toy ny efitrano fianarana virtoaly ary, raha te ho mazoto hatrany, dia manome rafitra valisoa izay hitazomana ny ankizy hianatra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Ny fampiharana sy lalao 7 tsara indrindra ho an'ny ankizy kely ho an'ny Android
Lalao 5 izay tsy azonao adino amin'ny findainao Android